Lehilahy Ekoetoriana Niatrika Famonjàna 18 Volana Noho Ny Nitehafany Tamin’ny Fihetsiketsehana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2015 2:09 GMT
Araka ny fitsaràna, tsy nisy porofo nanamarina fa nanimba fananana i Francisco Endara , kanefa nisy ny porofo fa meloka izy noho ny “fitehafana, marika iray tsy azo lavina fa nanaiky ilay hetsika izy.” Sarin'ilay efitra famonjàna, nalaina avy tamin'ny kaonty Flickr an'i my_southborough nampiasàna lisansa Creative Commons (CC BY-ND 2.0)
Ny 30 Septambra 2010, nandray anjara taminà fihetsiketsehana lehibe ireo polisy tany Ekoatora, nangataka ny fanafoanana ny Lalàn'ny Asam-panjakana ao amin'ny firenena, izay nanala ireo fanampiana ara-bola ho an'ny fampiakarana sokajy sy ireo loka. Nolazain'ny governemanta Rafael Correa ilay hetsika ho “fanandramana matipaika hikarakarana fanonganam-panjakana manohitra [ilay lalàna]” . Nihitatra nanerana tanàna maro ireo fihetsiketsehan'ny polisy, ary tafiditra tamin'izany ny fanakànan-dàlana sy ireo korontana.
Nandritra izany fotoana izany, nanambara ny fepetra fanao amin'ny tany misy hotakotaka tany Ekoatora ny Filoha, didim-panjakana iray izay nanery ireo haino aman-jery handefa ny fandaharana nasiônaly nandritra ny ora enina tsy an-kiato. Nalefa avy tamin'ny fantsom-panjakana EcuadorTV, izay mampiseho ny GamaTV ihany koa mandritra izany, fandaharana izay nahaleo tena teo aloha, saingy nogiazana tamin'izany ary tantanan'ny fanjakana ankehitriny. Nivoatra tokoa ilay fifandonana ka tonga hatramin'ny hoe ireo mpanao fihetsiketsehana — ireo mpanohana sy mpanohitra an'i Correa — samy tonga tany amin'ny birao foiben'ilay tambajotra avokoa mba hanohitra. Tao anatin'ireo nivory teo i Francisco Endara Daza, injenieranà rafitra informatika ary mpanoratra fanehoan-kevitra ara-politika tsindraindray amin'ny Aterineto sy amin'ny media eo an-toerana.
Niaraka tamin'ireo olona efatra teo tamin'io andro io, niatrika ny fanenjehan'ny minisiteram-bahoaka i Endara. Nampangain'ireo manampahefana ho mpiray tsikombakomba aloha izy tamin'ny voalohany, avy eo mpiaraka nanatontosa. Araka ny Fitsaràna, “nitehaka” ilay fanafihana an'ilay birao i Endara. Ny lahatsoratra navoakan'ny vohikalam-baovao La Historia nanazava fa nanandrana ny higafy sy hamotika ilay televiziôna tantanan'ny fanjakana EcuadorTV ry Endara sy ireo namany niaraka voaheloka taminy.
Nahazo sazy efatra taona an-tranomazina avy tamin'ny fitsaràna izy ny 8 Martsa 2014, ary nahena ho roa taona io noho ny fampakàrana didy. Fanenàna sazy nohamarinin'ireo manampahefana tamin'ny hoe tsy nisy porofo fa namotika ilay toerana izy, kanefa nisy porofo fa meloka noho ny “fitehafana, marika tsy azo lavina fa nanaiky ilay hetsika izy.”
Taminà tafatafa niaraka tamin'ny gazety an-tsoratra mivoaka isan'andro El Universo, nilaza i Endara fa netina lavidavitra kokoa ilay fanapahankevitr'ireo fitsaràn'ny faritra sy ny fanjakana, ary nandefa rakipeo sy sary nalaina tamin'io andron'ny fihetsiketsehana io ny tenany mba hitondràny ny raharahany eo anivon'ny Fitsaràna Eo amin'ny samy Amerikana momba ny Zon'Olombelona, fitsaràna momba ny zon'olombelona an'ny Firenena Mikambana eo amin'ny faritra izay mitsangana ao Ekoatora. Vao tamin'ny taona lasa teo, noharin'ny Filohan'i Ekoatora Rafael Correa tamin'ny “orinasa mpanangona fako” ilay fitsaràna.
Taorian'ny volana maromaro, ny 21 Oktobra 2015, nozarain'i Endara tamin'ny kaonty Twitter-ny fa nolavin'ny fitsaràna nasiônaly ny fampakarany ho an’ ny didy ho fanafoanana ilay fiampangàna azy ary nambara azy ho mpiaraka nanomana ilay fanafihana tao amin'ilay fahitalavi-panjakana izay niafara amin'ny sazy famonjàna 18 volana:
Didy ny 21 Oktobra tamin'ny raharahan'ny governemanta manenjika ahy. Izany rehetra izany satria aho nitehaka. Raha ampangaina aho, mba hilatsaka amin'ireo mpitsara ihany koa anie ny fanamelohana toy izany.
Nolavin'ireo mpitsara ilay fampakarana didy. Nolazain'izy ireo fa tsy nampiseho porofonà momba ny fanitsakitsahana lalàna anenjehana anay ireo mpisolovava.
Nampangaina ho mpiara-nanatanteraka aho, novaina avy tamin'ny hoe mpiray tetika. Nampitomboan'izy ireo ireo fiampangana ahy niala tamin'ny hoe mpiray tetika ka lasa mpiara-nanatanteraka. Nosazian'izy ireo 18 volana daholo izahay. Fanitsakitsahana ny rariny tanteraka.
Ankehitriny, ofisialy ny sazy 18 volana an-tranomaizina noho ny fitehafana. Eto Ekoatora samirery ihany. Miandy ny didy vita an-tsoratra.
Taminà tafatafa niaraka tamin'ny Diario La Hora, namelabelatra ny toerana noraisiny i Endara:
Na nitehaka aza aho, zavatra tena tsy tsaroako mihitsy ny tena marina, tsy heloka izany, fa hoe fisomparana sy fampihorohoroana kosa…Araka ny mpitsara ao amin'ny distrika, ny tehaka nataoko dia mariky ny fanekeko ny zavatra nodradrain'ireo olona nanao hoe: “Eny ho an'ny demôkrasia, tsia ho an'ny didy jadona” ; “Mila fandaharana misokatra izahay”, “fahalalahana miteny”; Araka ny fantatro, tsy heloka velively izany.
Tamin'ny media sosialy, lasa nalaza be ilay tenifototra #YoAplaudo (Mitehaka aho) raha nandefa ny heviny momba ilay didin'ny fitsaràna mikasika ny raharaha Endara ny olona.
#Tehafako ny rafitra ara-pitsaràna Ekoatoriana izay nahita fa meloka ilay adala niditra an-keriny tao amin'ilay fandaharam-panjakana
#Tehafako ireo rehetra tsy matahotra intsony ny hiteny ny eritreriny na inona na inona zava-mitranga
#Tehafako ny hoe mbola manohy ny hetsika ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo saribakoliny, raha 70% kosa mitehaka ho an'ny governemanta Rafael Correa
#Tehafako ireo rehetra izay na eo aza ny hambo, mbola mampiaka-peo ihany, #Tehafako ireo lehilahy sy vehivavy mahery fo izay tsy matahotra ny herin'ny fanjakana.
Ireo olon-tsotra Victor Hugo Erazo, Patrivio Fajarado, Max Marín y Galo Monteverde ihany koa nosaziana 18 volana an-tranomaizina noho ny namakiany sy nidirany tao amin'ny trano fiasan'ilay tambajotram-panjakana ny 30 Septambra 2010. Araka ny gazety an-tsoratra mivoaka isan'andro La Hora, nilaza i Erazo fa tokony tsy hisy hiala ny firenena ireo voampanga rehetra ary tokony hiandry ny firaketana an-tsoratra ny didy izy ireo, mba ho mazava tsara io ary hovaina, ary mba hanombohana ireo ambaratonga hafa rehetra hanafoanana ilay didy.
Tena nahamay ho an'ny zon'olombelona any Ekoatora ny taona 2015. Mbola mafy hatrany ao amin'ny fahatsiarovan'ireo olom-pirenena ilay tranganà fanivanana nataon'ny Filoha Correa tamin'ny sarisary nataon'ny Crudo Ecuador, ary nomelohan'ny Human Rights Watch ireo mpitsara Ekoatoriana tamin'ny fanemorana ireo fampakàrana didy nataon'ireo mpanao hetsika izay nohenjehana noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fanjakana. Niampanga ireo lalàna sasany ao Ekoatora ankehitriny ihany koa ny vondron'ny manam-pahaizana avy amin'ny Firenena Mikambana sy ny Kaomisionan'ny itambaran'ny Amerikana ho an'ny Zon'Olombelona, ireo lalàna ireo izay mametra ny fahalalahan'ny fitenenana sy ny fivoriana ao amin'ny firenena.